Kaopy Tea Tea, Tumbler divay divay, Vilany vera - Qiaoqi
Fisoratana anarana amin'ny mari-barotra
Misotro ambongadiny fisotroana rano fisakafoanana lehibe ...
tsofina tànana fofonaina natokana ho azy logo miavaka Magnetic h ...
2019 vaovao fahatongavan'i Dragon tavoahangy divay fitaratra
Heat Resistant Glass Hand Drip pyrex personaliz ...
Kafe vera borosilicate avo mahazaka hafanana m ...
Kôkôla fisotroana kapoaka misy vera vita amin'ny atody
Ny Travel Transparent Sleeve Travel azo ampiasaina foana ...
Logo maoderina boribory maoderina mazava tsara Wall Double Boro ...
Tongasoa eto Qiaoqi
Shijiazhuang Qiaoqi Glass Product Co., Ltd. miorina ao amin'ny Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei any Sina.
Izahay dia orinasa manondrana matihanina izay manana ozinina manokana, ary manana ekipa matihanina miadidy ny varotra fanondranana.
Azontsika atao ny manaiky ny ORON'ANDRIAMANITRA ary hamokatra ho toy ny logo anao sy ny boaty miloko. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mahazo ny serivisy mialoha sy fivarotana tsara indrindra ianao. Ny foto-kevitray dia 'Tsara kalitao & Vidy mahafinaritra & Serivisy mahafinaritra'.
192020 / Oct
Ahoana no hanamorana ny fiainanao? Ny dispenser menaka fitaratra borosilika avo lenta dia afaka manampy anao hifehezana ny fiainam-pitondrantena. Ity tavoahangy ity dia vita tanana. Akora fitaratra Borosilicate avo. Manoro hevitra!
Hatramin'ny nahaterahany, ny teacup vera borosy dia efa nankafizin'ny olona lalina. Izy io dia iray amin'ireo ilaina amin'ny fiainana an-trano, miaraka amin'ny mangarahara avo, fanoherana ny abrasion, fisaka madio, fanadiovana mora ary fahasalamana. Na izany aza, maro ny fanontaniana napetraka mangingina, "Can high b ...